Brazil: “Nihoarantsika Ny Harin-karena Faoben’i Royaume Uni. Dia ahoana?” · Global Voices teny Malagasy
Brazil: “Nihoarantsika Ny Harin-karena Faoben'i Royaume Uni. Dia ahoana?”
Nandika (en) i Paula Góes
Voadika ny 02 Janoary 2012 12:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Deutsch, 日本語, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, srpski, عربي, Português
Lohateny vaventin'ireo mpampahalala vaovao niomerika rehetra tao Brezila nandritra ny herinandro faran'ny taona 2011 ny hoe : Nihoaran'i Brezila i Royaume Uni tamin'ny nahalasa azy ho ny firenena faha enina matanjaka indrindra ara-toekarena eran-tany. Ampahan'ny famoahan-dahatsoratra tamin'ny 26 Desambratao an'ny gazety The Guardian, ilay gazety dia nitatitra avy amin'ny vinavina nataon'ny Foibe ho an'ny Fikarohana ara-toekarena sy ara-pandraharahàna milaza fa hamàrana ny taona amin'ny maha-firenena fahaenina eran-tany manana ny harin-karena faobe (PIB) ambony indrindra azy ny firenena: $2,500 lavitrisa.
Sambany izao i Grande Bretagne no nidina any aorian'ny firenena Amerikana Tatsimo iray amin'ity karazana filaharana ity, izay vaovao niteraka fanehoan-kevitra mahatsikaiky avy tamin'i tale mpanatanteraky ny Cebr , Douglas McWilliams : “nandritra ny fotoana maharitra dia resin'i Brezila hatrany ny firenena Eraopeana teo amin'ny lalao baolina , saingy ny fandresena azy ireny ara-toekarena dia zava-mahatalanjona iray vaovao”. Ao amin'ny firenena, ilay vaovao koa dia niteraka hatsikana mahafinaritra, tahaka izay asehon'ny fantina sary fanaingoana samihafa ao amin'ny bilaogy Humor Político [hatsikana ara-politika, pt].
Sary fanaingoana avy amin'i Alberto Alpino Filho, navoaka tao amin'ny Yahoo! Brasil ary naverina navoaka rehefa avy nahazoana alàlana.
Ny bilaogy Sarico [pt] dia nifidy ilay vaovao ho ny vaovao tsara indrindra nandritra ny taona:
Tsy isalasalàna fa ity no vaovao goavana indrindra ho an'ny taona 2011. Ary io vaovao tsara io dia vokatry ny asa nataon'ny tànana maro, nanomboka tany amin'ny 20 taona lasa. Ny fananganana firenena iray toa an'i Brezila dia mila tànana marobe sy fotoana maharitra, ifandimbiasam-piakarana sy fidinana, ary araham-pisalasalàna maro. Ilay firenen'ny ampitso dia hànana ny anarany sy ny lokony ary miteny Portigey.
Ho ela velona anie i Brezila!
Ho an'ilay tale ara-bola, Hamilton Silva [pt], mizotra ho amin'ny toerana fahadimy eo amin'ny latabatry ny matanjaka ara-toekarena erantany i Brezila ary hoavy tsaratsara kokoa aza no mbola miandry. Naneho hevitra izy tao amin'ny bilaoginy :
Ireny singa rehetra ireny sy ny fahatokisan-tena avy amin'ireo manampahefana no nitondra ny firenena hisondrotra be tsy araka izay nandrasana, entina hilazàna fa, tena mahavita manatratra toerana mendrika kokoa isika. Ny toerana amin'ny maha-toekarena fahadimy manerantany dia manaporofo fa tokony hanana toerana lehibe ao amin'ny Filankevim-pilaminan'ny Firenena Mikambana ny firenena Breziliana, tokony hohenoina tsara eo anivon'ny OPEC ary tsy maintsy hajaina rehefa antsoin'ny Fikambanana [Iraisampirenena] momba ny varotra sy ny hafa. Tokony hanana andraikitra lehibe ao anatin'ny G8, G20 sy ny sampan-draharaha iraisam-pirenena hafa toy ny FMI sy La Haye. Tonga ihany isika izao nony farany.
Raha mahavita zavatra tsara eo amin'ny resaka harin-karena faobe i Brezila, tsy azo lazaina ho toy izany kosa ny toerana misy azy eo amin'ny Tondro Momba ny Zon'Olombelona na ny Human Development Index (HDI), izay mandrefy ny hatsaran'ny fari-piainana any amin'ny firenena tsirairay. Ilay mpahay toekarena, Frederico Matias Bacic [pt] mamahavaha ilay vaovao, dia manazava ny hoe nahoana “isika no tsy afaka hirehaka.” Manipika izy fa :
Ny fiakaran'ny harin-karena faobe dia maneho firoboroboan'ny fihariana ara-toekarena ( azontsika lazaina fa ity fitomboana ity dia mitarika amin'ny fisian'ny asa sy fitomboan'ny vola miditra), izay mahafinaritra, saingy io dia tsy maneho mihitsy fihatsaràna ara-tsosialy mivaingana. Azontsika ny fahaenina manerantany amin'ny resaka harin-karena faobe, saingy raha jerentsika ny HDI (Human Development Index), dia any amin'ny toerana faha 84 isika, mbola any aoriana lavitra an'ireo firenena toa an'i Trinidad sy Tobago, Meksiko, Arzantina, Bahamas. Raha jerentsika ny harin-karena faobe per capita erantany, dia any amin'ny faha-76 no misy antsika.
Ny tiako lazaina ao anatin'ity lahatsoratra fohy ity dia hoe misy tondro ara-toekarena/sosialy mbola mavesa-danja kokoa tokony hojerena noho izay harin-karena faobe. Ny fanànana iray fotsiny amin'ny herin-karena faobe ambony indrindra erantany, mandeha irery amin'izao, dia tsy midika velively fa nanao tsara isika, mila mijery karazanà angona betsaka isika, tsy azontsika atao ny midehaka aminà fanolo iray monja. Mba hanehoana izay tiako hotenenina, alaivo sary an-tsaina ity : hoe mitambatra daholo, hono, ny firenena Afrikana rehetra mba ho lasa firenena iray vaovao. Mazava loatra, ity firenena vaovao ity dia tsy maintsy hiditra ao anatin'ireo folo voalohany erantany amin'ny resaka harin-karena faobe, saingy io tsy voatery hidika fa ho lasa mivoatra ara-tsosialy sy manaja ny rariny izy. Ho firenena iray lehibe manana harin-karena faobe ambony fotsiny izy, Ahitàna vahoaka mahantra marobe, feno olana ara-tsosialy isan-karazany.
Mbola mijery ihany koa ireo tondro hafa, ilay mpanao gazety Sérgio Utsch [pt] dia manentana mba hitandrina. Mampitandrina izy:
Ny zava-doza amin'ity vaovao mampirehareha ny firenena ity dia ny hajambàna mety haterany. Mavesa-danja kokoa noho ny fanànana mofomamy ngezabe ny fahafahan'ny tsirairay mihinana araka ny tokony ho izy avy amin'izany. Ireo “mpanohitra” izay voasongontsika teo amin'ny latabatry ny ligy ara-toekarena dia nahavita izany, fa mba aiza isika Breziliana izay difotra anaty ranomasimben'ny mpanao jadona, olona mpanao risoriso sy tsy mahavita azy. Marina fa ny lalivay amin'ny mofomamy Anglisy dia tsy niasa tsara, saingy kosa, tsy toa an'i Brezila, fa any ny ankamaroan'ny olona dia efa manana sahady ny anjarany efa azo antoka.
Ilay mpahay toekarena, Rodrigo Constantino [pt] dia miteny fa ny tsirairay dia mila mijery manodidina ny firenena mba hahita fa tsy misy zavatra tokony hankalazaina anaty fahantràna, heloka bevava, fangiazana tsy ara-drariny ny vola miditra amin'ny alalan'ny kolikoly sy ny tsimatimanota, ankoatr'ireo olana ara-tsosialy maro hafa. Manontany izy :
Eny, ananantsika ny harin-karena faobe fahaenina maneran-tany. Dia ahoana? Miaraka aminà olana marobe miseho eo ambany masontsika isan'andro vaky, dia ilaina ny manontany hoe : Misy mihainooo?! Mba nivoatra ve ny fiainan'ny tsirairay taorian'ny nandrenesana io vaovao io? Ary raha fiezahana hamily ny saintsika tsy hibanjina ireo olana marobe tsy maintsy vahàntsika mba hahatonga an'i Brezila ho firenena lafatra kokoa izany, ho miroborobo kokoa, malalaka ary mangarahara?
Daisy [pt] dia maneho fanantenana nefa tsy manary ihany koa ny fahatsapàna itambarambe (fitandremana). Akisany mihitsy aza ny fankalazàna mba ho aminà fotoana hafa metimety kokoa :
Aleo isika mankalaza rehefa tratrantsika ny fari-piainana ankapoben'ny Anglisy!
Toekarena: Nosongonan'i Brezila ny Britanika. Sary fanaingoana avy amin'i Benett, navoaka nahazoana alàlana.
Araka ny ambaran'ny Cebr, ny laharan'ny toekarena matanjaka indrindra dia eo ambany fitarihan'i Etazonia, arahan'i Shina, Japana, Alemana, Frantsa, Brezila ary ny Royaume Uni. Araka ny ambaran'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI), ny harin-karena faobe ao Brezila ny taona 2011 dia tafakatra tokony ho $2,518 lavitrisa eo ho eo, izay manamafy ny vinavina nataon'ny Cebr. Tamin'ny 2010, tany amin'ny laharana faha-7 i Brezila, miaraka amin'ny harin-karena faobe $2,090 lavitrisa.
Misaotra anao nandika ny lahatsoratro avylavitra!
03 Janoary 2012, 12:45
03 Janoary 2012, 15:29
eto aho vao tonga saina fa tena mbola betsaka ny voam-bolana malagasy tsy fantatro … 🙂
08 Janoary 2012, 20:58
Ny voambolana ara-toekarena aloha dia efa tsy mahazatra ny maro. Fa na izany na tsy izany dia efa nisy koa ny niteny hoe manana voambolana mihitsy i Avylavitra
09 Janoary 2012, 08:55